Etu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia nkeonwe na Debian 9 Stretch? | Site na Linux
Etu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia nkeonwe na Debian 9 Stretch?
Nkuzi a anyị ga-egosi gị otu esi etinye Nvidia ndị ọkwọ ụgbọ ala na Debian 9 Stretch. Site na ndabara, Debian na-eji onye na-emeghe oghere na-emeghe oghere, nke gụnyere na kernel Linux, maka kaadị Nvidia.
Agbanyeghị, onye ọkwọ ụgbọala a enweghị nkwado 3D osooso, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọtụtụ kredit eserese gị na sistemụ gị, ị ga-etinye ndị ọkwọ ụgbọ ala ya.
Tupu ị wụnye onye ọkwọ ụgbọ ala, Ekwadoro m iwepu Secure Boot ma ọ bụrụ na ị na-eji UEFI firmware.
Nke a bụ n'ihi na a ga-agbakwunye modul Nvidia na kernel, yabụ kernel ọhụrụ ahụ agaghị enwe ike ịgafe nkwenye mbinye aka. Ọ bụrụ na urenọ ná Ntụkwasị Obi buut na-nyeere, gị usoro nwere ike ọ gaghị enwe ike buut.
1 Wụnye ọkwọ ụgbọala Nvidia na Debian 9 Stretch
1.1 Lele nwụnye
1.2 Gbanwee n'etiti kaadị Intel na Nvidia na laptọọpụ Nividia Optimus
1.3 Etu ị ga - ewepụ ndị na-anya Nvidia nke onwe ya na Debian 9 Stretch?
Wụnye ọkwọ ụgbọala Nvidia na Debian 9 Stretch
Iji malite ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia na sistemụ anyị, anyị ga-emepe ọnụ na ya ka anyị gaa nyochapụta nke onye ọkwọ ụgbọala a na-eji maka kaadị Nvidia:
Ebe ha nwere ike ịchọpụta na ha na-eji ọhụụ emeghe oghere:
Ebe ọ bụ na ngwugwu Nvidia na Debian nwere ikike, Anyị ga-enyerịrị nkwado na ntinye akwụkwọ na-anaghị akwụ ụgwọ na /etc/apt/sources.list yana iwu ndị a.
Ugbu a oge eruola idebanye aha onye ọkwọ ụgbọ ala, iji zere esemokwu:
N'ime faịlụ ahụ, anyị tinyere ihe ndị a:
Anyị na-emechi ma na-azọpụta na Ctrl + O na Ctrl + X.
Ugbu a Wụnye ngwugwu nvidia-drivers site na iji iwu ndị a:
N'oge nwụnye ị ga-ahụ ozi na-esonụ, dị nnọọ kụrụ Tinye iji gaa n'ihu.
Ọ bụrụ na njehie ọ bụla emee n'oge ntinye nke ngwugwu na usoro, Ikwesiri ịwụnye ọkwọ ụgbọala site na ọdụ nchekwa na-adọtị azụ.
Iji mee nke a, na ọnụ ị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ugbu a Iji wụnye nvidia-ọkwọ ụgbọala site na ebe nchekwa na-agbatị agbakwunye agbakwunyere na usoro ahụ, anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Ozugbo nrụnye ahụ zuru, Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na-enyemaka nke ndị na-esonụ iwu:
Mgbe usoro reboot, Anyị na-aga n'ihu ịmalite nnọkọ ọrụ anyị, anyị ga-emeghe ọnụ na ya ka anyị pịnyere iwu na-esonụ:
Na nke a, ha kwesịrị ịhụworị na ha na-eji ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia. Nwere ike ile anya na nchịkọta ngwa gị maka mmemme Nvidia X Server.
Na nke na-akwọ version, ndịna kaadị nkọwapụta, kaadị okpomọkụ, wdg a pụrụ iji.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta mmemme a, ịnwere ike iwunye ya na:
Na-agba ọsọ na:
Gbanwee n'etiti kaadị Intel na Nvidia na laptọọpụ Nividia Optimus
Maka ndị bụ laptọọpụ ọrụ na Nividia Optimus, O nwere ike ịbụ na ha zutere njehie mgbe imeghe mmemme Nvidia X Server, ebe ọ bụ na mgbe ha mepere ya, ha ga-ahụ ozi nke ụdị:
"O yiri ka ị naghị eji ọkwọ ụgbọala nvidia x debian"
Maka nke a ha nwere ike iji Bumblebee na Primus mee ngwa ngwa n'otu n'otu na kaadị Nvidia. Iji wụnye Bumblebee na Primus na sistemụ gị, ị ga-emepe ọnụ ma gbaa iwu ndị a:
Iji mee mmemme na kaadị Nividia, jiri iwu dị ka nganiihu primusrun.
Na nke a, ịnwere ike ịchọpụta nke a na iwu ndị a:
Imepe mmemme Ntọala Nvidia X, gbaa ọsọ:
Etu ị ga - ewepụ ndị na-anya Nvidia nke onwe ya na Debian 9 Stretch?
Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ịchọghịzi onye na - ahụ maka onwe ya ma ọ bụ na ọ na - akpata esemokwu na sistemu gị, ị ga - ewepụ ya na sistemụ gị n’enyemaka iwu ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Etu esi wụnye ndị ọkwọ ụgbọala Nvidia nkeonwe na Debian 9 Stretch?
Linuxero kemgbe 1998 dijo
Ndị DEBIAN wiki akọwaala ya nke ọma otu otu, otu esi etinye NVIDIA draịva.
Dị mfe karịa kọwara ebe a.
Gaa Linuxero kemgbe 1998
SmartSynchronize - ịba uru maka nyocha na folda